I-China L-Lysine HCL CAS 657-27-2 yabenzi beBakala le-Pharma (USP) kunye nabathengisi | Ndiyabulela
I-L-Lysine HCL CAS 657-27-2 yeBakala lePharma (USP)
Igama leMveliso: L-Lysine HCL
Iipropathi zeMveliso: Izinto ezingenakristal ezingenambala, ezingenasiphunga, iswekile ekrakra, inyibilika emanzini, inyibilika kancinci kwi-ethanol kunye ne-diethyl ether
Ukupakisha: 25kg / ibhegi okanye ngokwemfuneko yoMthengi
Igama lemveliso:: L-Lysine
ILysine (Isifinyezo seLys) yenye yeendidi ezibalulekileyo zeeproteni. Umzimba ufuna iLysine eyenye yee-amino acid ezisibhozo. Kodwa iLysine ayinakwenziwa ngumzimba. Kufuneka ibonelelwe ekutyeni. Yiyo loo nto ibizwa ngokuba yi "amino acid yokuqala". Njengearhente elungileyo yokunyusa isondlo, uLysine unokunyusa izinga lokusebenzisa iiprotein ukuze ikonyuse isondlo sokutya kakhulu. Kukwasebenza ngokukuko ekuphuculeni ukukhula, ukulungelelanisa ukutya, ukunciphisa isifo kunye nokwenza umzimba womelele. Inokuphelisa ukungcola kwaye igcine kukutya okusemathinini.
I-1) Isetyenzisiwe kulungiselelo lwe-amino acid yotofelo kunye nokwenza ukuba isiphumo sibengcono kune-hydrolytic protein transfusion kunye neziphumo ebezingalindelekanga.
I-2) Inokwenziwa izongezo zesondlo kunye neevithamini ezahlukeneyo kunye neeglucoses, ngokulula ezifunxwe ngamathumbu esisu emva komlomo.
3) Ukuphucula ukusebenza kwamanye amayeza kunye nokuphucula ukusebenza kwawo.
ILysine luhlobo lwe-amino acid ebalulekileyo ebantwini. Inokonyusa ukusebenza kwe-hematopoietic, i-gastric secretion, ukuphucula ukusetyenziswa kweprotein, ukunyusa ukumelana nezifo, ukugcina ulungelelwaniso lwe-metabolic kunye nokuxhasa ukukhula komzimba kunye nokrelekrele kwabantwana.
1) Ukuphucula umgangatho wenyama kunye nokunyusa ipesenteji yenyama ephilileyo
2) Ukuphucula ukusetyenziswa kweprotein yokutya kunye nokunciphisa ukusetyenziswa kweprotein eluhlaza
I-3) I-Lysine sisondlo esondla ukutya kunye nomsebenzi wokuphucula ukutya kwamarhamncwa kunye neentaka, ukuxhathisa izifo, ukuphilisa amanxeba, umgangatho wenyama kunye nokwenza ukhuseleko esiswini. Yinto ebalulekileyo yokuhlanganisa i-cranial nerve, iseli yentsholongwane, iprotein kunye nehemoglobin.
4) Kulumkele ukukrwitsha kwehagu, ukunciphisa iindleko zesondlo kunye nokuphucula imbuyekezo yezoqoqosho
ILysine iyafumaneka ngokufomatha i-amino acid perfusion kunye nokwenza isiphumo esingcono kune-hydrolytic protein perfusion kunye neziphumo ebezingalindelekanga ezingaphantsi. Inokwenziwa iarhente yokuphucula ukondla ngeevithamini ezahlukeneyo kunye neeglucoses, kwaye ifunxwe ngokulula ngamathumbu esisu emva komlomo. ILysine inokuphucula ukusebenza kwezinye iziyobisi kunye nokusebenza kwazo.
Umba I-USP32 I-USP40
Inkangeleko Umgubo omhlophe wekristale
Ukuchonga Ukuvumelana Ukuvumelana
Uvavanyo 98.5% ukuya kwi-101.5% 98.5% ukuya kwi-101.5%
Ixabiso le-PH 5.0 ～ 6.0 -
Ukuphulukana nokomisa ≤0.4% ≤0.4%
Intsalela kwi ucinezelo ≤0.1% ≤0.1%
Ikloridi (njengeCl) 19.0% ukuya kwi-19.6% 19.0% ukuya kwi-19.6%
Amanzi aMandla (njenge-Pb) 15ppm 15ppm
Intsimbi (njengo-Fe) 30ppm 30ppm
Sulphate (njenge SO4) ≤0.03% ≤0.03%
Ezinye iiamino acid Ukuvumelana Ukuvumelana
Ukucoceka kwezinto eziphilayo Ukuhlangabezana nemfuno -
Ujikelezo oluthile + 20.4 ° ～ + 21.4 ° + 20.4 ° ～ + 21.4 °
Egqithileyo I-L-Leucine CAS 61-90-5 kwiBakala lePharma (USP)
Okulandelayo: I-L-Methionine CAS 63-68-3 kwiBakala lePharma (USP)
I-L-Valine 72-18-4, L-Threonine Pharm kwiBakala, 73-32-5 L-Isoleucine, Ikhemesti yeBakala L-Leucine, Ukutya kwezilwanyana, L-Threonine kwiBakala lokutya,